Voadika ny 22 Janoary 2013 22:55 GMT
Matetika amin'ny alina no ahitàna mpikambana avy amin'ny vondrompiarahamonin'ireo ‘trans’ (olona nanova taovam-pananahana) ao Porto Rico, mivenjivenjy manao ny asany eny amin'ny kihon-dàlana ny sisin-dalamben'ireo ‘avenue’ any Santurce, ao afovoan-tananan'i San Juan. Mivaona amin'ny tokony ho izy ny fomba fitafin'izy ireo, manao solovolo ary kiraro avo. Ny sasany amin'ny tantaran'izy ireo dia voarakitra anaty boky, horonantsary ary rakitsary maromaro nanaraha-maso azy ireo mivenjivenjy amin'ny alina. “Ny fanjaitra”, fanadihadiana vaovao iray tarihan'ilay mpanao horonantsary iray avy eo an-toerana antsoina hoe Carmen Oquendo-Villar, izay tsy miompana loatra amin'ny zava-mitranga eny an-dàlana; fa mifantoka kosa amin'ny endrika ambadiky ny sehatra dia fandraharahàna momba ny hatsaran-tarehy hita eny an-dalana izay ametrahan'ireo mpiasan'ny sisin-dàlana fitokisana.